Hay’adda daryeelka bulshada Puntland oo kormeertay naafadda Garoowe – Radio Daljir
Maarso 19, 2013 5:23 b 0
Garoowe, March 19- Hay’adda daryeelka bulshada Puntland ayaa maanta oo talaadaa kormeer ku samaysay qaar ka mida xarumaha ay ku nool yihiin dadka? naafadaa ee magaalada Garoowe ee xarunta maamulka Puntland.
Kormeerkan hay’addu ay samaysay waxaa hogaaminayay agaasimaha guud ee hay’adda Xuseen Maxamuu (Xuubsireed) oo dhawaan isagu xilkaasi loo dhiibay.
Kormeerka ka dib ayaa mar uu agaasimuhu waraysi uu siiyay radio daljir ayuu ku sharaxay in kormeerkan qayb uu ka yahay kormeerro iyo u kuur galid hay’addu ay ku samaynayso deegaanada Puntland oo dhan iyo xarumaha naafada ay ku nool yihiin.
Tan iyo intii Xuseen Maxamuud Maxamed (Xuubsireed) loo dhibay xafiiska hay’adda daryeelka bulshada Puntland waxaa biloodway dhaqdhaqaaq iyo dardar ku aaddan wax u qabashada iyo u hormarinta naafada Puntland.
Agaasimaha ayaa sheegay hay’addu inay waddo qorshe ballaaran oo wax loogu qabanayo dadka naafadaa taasina ay ka mid tahay shaqooyinka loo unkayba hay’adani.
Maxkamadda gobolka Banaadir oo xukuntay eedaysanayaal danbiyo kala duwan lagu eedeeyay